Misimisy kokoa momba ny volan'ny Investors Bulgarian ho an'ny Hotel Kempinski vaovao any Tanzania
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Misimisy kokoa momba ny volan'ny Investors Bulgarian ho an'ny Hotel Kempinski vaovao any Tanzania
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Eswatini Breaking News • Films • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • fanorenana • Resorts • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fizahan-tany dia fifantohana voalohany amin'i Tanzania. Delegasiona avy any Bulgaria ny herinandro lasa teo dia tany Dar es Salaam, Tanzania hiresaka tetik'asa fizahan-tany fizahan-tany vaovao nataon'ny German Kempinski Hotel Group.
Ity vondrona ity dia nahita ny sain'ny Hon. ny minisitra Dr. Damas Ndumbaro, sy Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao Afrikana fizahan-tany.
Ny Kempinski Hotel Group monina ao Munich, Alemana dia mikasa ny hanangana Hotely Kempinski misy kintana dimy any Tanzania Avaratra
Ny trano fandraisam-bahiny dia heverina fa hita any Tarangire Avaratra Tanzania, Lake Manyara, Ngorongoro ary ireo valan-javaboary Serengeti.
Nandray ny andraikiny manokana ny filoha Samia mba hitarika fanadihadiana manokana, ny “Royal Tour”Nokasaina hanomezana marika izao tontolo izao ireo mpizahatany any Tanzania.
Nisy solontena iray mpamatsy vola Boligaria tonga tao Tanzania tamin'ny herinandro lasa teo mba hiresaka momba ny tetik'asa famolavolana hotely mitentina 72 tapitrisa dolara ao amin'ny firenena.
Andriamatoa Ayoub Ibrahim, izay tale jeneralin'ny Konferansa iraisam-pirenena momba ny fizahantany sy fampiasam-bola any UK no niandraikitra ny delegasiona nitsidika an'i Tanzania tamin'ity herinandro ity.
Araka ny loharanom-baovao eTN dia hanomboka amin'ny Janoary 2021 ny fananganana Kempinski Resort vaovao ao amin'ny firenena. eTurboNews dia nanantona an'Andriamatoa Ayoub ary nolazaina fa hisy ny famoahana gazety amin'ny fotoana manaraka, fa kosa ny loharanom-baovao amin'ity andiany voalohany ity dia manana hadisoana.
Ny fanavaozana farany an'i Tanzania ara-toekarena tamin'ny volana jolay dia manasongadina ny fahafaha-manao lehibe tsy voatanisa eo amin'ny sehatry ny fizahantany hitarika ny fandaharam-pandrosoana ny firenena. Fanadihadiana vaovao iray no miresaka momba ny olana efa hatry ny ela atrehin'ny fizahan-tany any Tanzania ary koa ny fanamby vaovao entin'ny valanaretina COVID-19.
Nilaza ny tatitra fa ny areti-mandringana dia manolotra fotoana ahafahan'ny hetsika politika miverina amin'ny laoniny ao anatin'ny fotoana fohy ary lasa motera maharitra mitombo amin'ny sehatry ny sehatra tsy miankina, fampidirana sosialy sy toekarena ary fanitsiana ny toetr'andro sy fanalefahana mandritra ny fotoana maharitra.
Tsy misy fampahalalana navoaka momba ny antsipiriany, ny risika, ny vidiny any Tanzania, ary ny tombony andrasana ho an'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany any Afrika Atsinanana amin'ny fotoanan'ny COVID ity.
Andriamatoa Cuthbert Ncube, filohan'ny Eswatini monina Birao fizahantany afrikanina dia nasain'ny ITIC hanatrika ny dinika miaraka amin'ny minisitry ny Tanzania ho an'ny harena voajanahary sy ny fizahantany Dr. Damas Ndumbaro.
Nanararaotra nifanakalo hevitra tamin'ny minisitra Andriamatoa Ncube momba ny haavon'ny fiaraha-miasa sy ny torolàlana azon'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany atao eo an-databatra hanaovana fampielezan-kevitra iraisam-pirenena momba ny fizahantany any Tanzania.
Taorian'ny fivoriana dia nitsidika ny faritra Conservation Ngorongoro (NCA) any avaratr'i Tanzania ireo solontena.
Vonona hiara-hiasa amin'ireo mpiray antoka rehetra eto Afrika ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB) mba hampiroborobo ny fizahantany marika sy marketing any Afrika. Ny tanjona ho an'ny ATB dia ny hahatonga an'i Afrika ho tokan-tena sy toerana ankafizin'ny fizahantany manerantany.
Nandritra ny fihaonana tamin'ny minisitry ny fizahan-tany tanzanianina dia nampanantena ny ATB fa hanohana ny fampiroboroboana ny Expo momba ny fizahantany atsinanana (EAC) ho avy izay hotontosaina voalohany ao Tanzania.
Nilaza tamin'ny minisitra Andriamatoa Ncube fa vonona hiara-hiasa amin'ny Governemanta Tanzania ny ATB amin'ny alàlan'ny fantsona ATB manerantany izay misy ny sehatra media sy ny fifandraisan'ny mpanatanteraka hafa.
Niorina niaraka tamin'ny fanohanan'ny eTurboNews in 2018.
Mpiara-mpanoratra: Apolinary Tairo, eTN Tanzania